Tekinika fiaraha-miasa: Ny latabatra boribory | Famoronana an-tserasera
Tekinika fiaraha-miasa: Ny latabatra boribory
Rehefa miatrika tetik'asa marobe toa ny fampielezana doka na sarimiaina sarotra isika dia ilaina ny mampiofana ekipa lehibe kokoa amin'ny mpiara-miasa, mizara ny lahasa izahay ary mizara ny tanjontsika amin'ny dingana mivaingana. Noho io antony io dia lasa ilaina ny fandrindrana sy ny fifandraisana. Na inona na inona tetik'asa, misy teknika mahaliana izaitsizy izay manampy amin'ny fanomezana vahaolana marobe amin'ireo olana mety hitranga avy amin'ny tanan'ny manam-pahaizana sy ny matihanina mahay. Ao amin'ny faritra misy anay matihanina dia misy ny fizahana hevitra na dingana famolavolana hevitra izay mitarika amin'ny dingana drafitra hafa. Miankina amin'ny tanjona antenaintsika hahatongavana amin'ny alàlan'ny paikadim-piasanay, dia hiatrika sakana bebe kokoa na kely kokoa izahay. Raha misy ny asa izay mitaky fiatrehana ireo vokatra manokana manan-danja sy ny drafitra tena feno dia ilaina ny fisian'ireo matihanina amin'ny sehatra sy manam-pahaizana manokana amin'ny faritra sasany.
Hanomboka amin'ity herinandro ity isika amin'ny lahatsoratra mahaliana indrindra izay hiadian-kevitra momba ny teknikan'ny fiaraha-miasa ao amin'ny Latabatra boribory. Ny mpiara-miasa aminay ary vahiny manokana, Sandra burgos de 30K Coaching, dia hiresaka momba an'io teknika io sy ny fomba fiasany. Tahaka ny mahazatra, avelako ho anao ny horonantsary etsy ambany, izay ananan'ilay manampahaizana momba ny Fahatsiarovan-tena Emotional io fomba io sy ambanin'ny kinova voasoratra. Raha tsy misy holazaina bebe kokoa, avelako miaraka aminy ianao ary ampahatsiahiviko fa raha manana fanontaniana na ahiahy ianao dia afaka mamela hevitra ho anay.
Ny teknikan'ny Latabatra boribory Ampiasaina amin'ny toe-javatra samihafa izy io, indrindra amin'ny akademia sy ny orinasa, satria ny firafiny dia mety amin'ny fiatrehana olana sarotra eo amin'ny manam-pahaizana. Raha mihazakazaka amin'ny orinasanao ianao dia ho liana amin'ny fianarana ny fomba fampiasana an'io teknika io. Andao handeha hijery azy!
3 Ahoana ny hevitrao momba an'io teknika io?
Inona no teknikan'ny latabatra boribory? Ny zavatra tadiavina rehefa mampiasa an'ity teknika ity dia ny lohahevitra sarotra iray nohadihadiana sy tsaboina tsara. Ohatra, alaivo an-tsaina hoe, aorian'ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny asa, dia misy fanontanina hatrany hatrany momba ny fiantraikan'ity fanavaozana ity amin'ny zava-misy eo amin'ny mpanjifa tsirairay. Ny azon'ity torohevitra ity atao mba hamonjy fotoana sy enti-miasa amin'ny fiatrehana ireo fangatahana miverimberina ireo sy hanomezana tolotra tsara kalitao kokoa dia ny fiantsoana latabatra boribory momba io lohahevitra io.
Fa ahoana no hataontsika amin'ny latabatra boribory? Hanombohana azy dia mila olona manam-pahaizana momba ny lohahevitra tiana horesahina isika na ireo olona manolo-tena hikaroka sy hahafantatra tsara momba an'io lohahevitra io mandritra ny fotoam-pivoriana. Mila olona iray hitantana ny antonony ihany koa isika, mazava ho azy, toerana iray izay andraisan'ny olona liana rehetra an'io lohahevitra io sy izay te-hanatrika. Ao amin'ny ohatry ny consultancy, namory ny mpiasany 4 ny tale ary nangataka tamin'ny tsirairay izy ireo mba hanadihady tsara ny fampiharana ny fanavaozana ny asa ho an'izy ireo manokana. Avy eo, nandefa fanasana izy hanatrika ireo mpanjifany rehetra mba hahazoan'izy ireo mandray soa amin'ity fiofanana ity, izay nanapa-kevitra ny hampandefitra ny tenany. Amin'ny fotoana hanombohana ny latabatra boribory, ny mpanjifa rehetra dia mipetraka amin'ny seza misy tànana manoloana ny latabatra lehibe izay ipetrahan'ny mpanelanelana sy ireo manam-pahaizana 4. Ny moderator dia mampahafantatra ny manam-pahaizana tsirairay sy ny lohahevitra manokana hiatrehany ary, tsirairay avy, dia manolotra fohifohy ny toe-draharaha avy amin'ny fahaizany manokana izy ireo. Ny andraikitry ny mpanelanelana dia ny fisorohana ny lohahevitra tsy ho diso lalana ary hitarika ny filaminana sy ny faharetan'ny fitsabahana. Avy eo dia tonga ny ampahany tena mahaliana. Ireo mpanjifany dia mampiseho ny ahiahiny manokana sy ny fisalasalany izay nipoitra vokatry ny fitsabahana ary, avy eo amin'ny latabatra boribory, mifanakalo hevitra amin'ny besinimaro ireo manam-pahaizana ary samy manome valiny mitambatra sy feno ho an'ny fanontaniana tsirairay.
Ahoana ny hevitrao momba an'io teknika io?
Azonao atao ve ny mieritreritra toe-javatra misy amin'ny asanao izay azonao ampiharana azy io hahazoana vokatra tsara kokoa na hitahiry loharano? Mandehana any amin'ny sehatra fanehoan-kevitra ary ampahafantaro anay. Raha tianao ity horonantsary ity ary te hahalala bebe kokoa momba ny teknikan'ny vondrona ianao, tsindrio ny "like" ary zarao amin'ireo tambajotra sosialinao. Ary raha te-hahazo fiofanana bebe kokoa toa izao ianao, isaky ny talata, amin'ny mailakao, misoratra anarana maimaimpoana amin'ny taratasim-pirenentsika isan-kerinandro 30k Coaching Ary tsarovy: manana be dia be eo an-tanan'ny rantsan-tànanao mihoatra noho izay tokony hahasambatra anao ianao. Anjaranao ny safidy!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Tekinika fiaraha-miasa: Ny latabatra boribory
Ny fiainan'ny mpamorona sary ao anatin'ny iray minitra